25: Martin Vrijland
Ndị 'mmụọ ezinụlọ' PsyOp (arụmọrụ nke mmụọ): na-ewepụ nnwere onwe gị ma na-ewebata 'ndị uwe ojii'
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 18 October 2019	• 9 Comments
'Ezinaụlọ' sitere na akụkọ Ruinerwold ga-echekwa Telegraaf ọtụtụ ego ma ọ bụrụ na ọ na-ere 'ndebanye aha ya'. Agbanyeghị, ọ bụrụ na imeghe ọgbaghara a 'ghost ezinụlọ' na ọnọdụ Google Chrome incognito, ị nwere ike gụọ akwụkwọ anaghị akwụ ụgwọ. Kedu ihe kpatara ị ga - esonyere akwụkwọ akụkọ nke kwadorolarị usoro ọchịchị Nazi na '40 /' 45 na ugbu a […]
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 26 February 2019	• 10 Comments
Ndị Verleiders, ụlọ ọrụ ihe nkiri nke George Van Houts, achọpụtawo m dịka onye mmegide a na-achịkwa n'oge mbụ. Mgbasa ozi DWDD nke Monday 25 February ikpeazụ nyere ihe àmà doro anya; naanị ohere na onye na-ekiri TV na-aghọta nke a bụ obere. Ihe omume a bụ n'ezie ihe atụ dị ukwuu nke nkà na ụzụ NLP. Iji ghọta na ị nwere [...]
Gịnị ka anyị kwesịrị iche banyere ọnwụ Anne Faber?
gbara akwụkwọ ANNE FABER, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 October 2017	• 31 Comments
Ọ bụ ezie na ikpe Romy na Savannah dị ka à ga-asị na edozila ya, nkwupụta doro anya ma ọ bụ nkwenye siri ike na-adịkwaghị, ikpe ahụ ana-egosikwa na a ga-agbachi ya. Ee, anyị na-enyo enyo ma enwere akụkọ akụkọ nke na-enye echiche na 2 na-eme ọtụtụ okwu ndị edozila, ma e nwere [...]
Nleta nile: 14.781.701
Uru Boris Johnson bụ ihe butere Nexit ụzọ? Amụma m maka Europe
Mmiri op Fraị Fraịdee: etu esi agbasa ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ maka mgbasa ozi LGBTI
Martin Vrijland op Fraị Fraịdee: etu esi agbasa ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ maka mgbasa ozi LGBTI